Ancient Pictures 1 | ကိုသင်ကာ . . . . Ko Thinker
← Love Story (End)
May 20, 2009 · 1:53 am
Ancient Pictures 1
These photos and pictures are from “A Narrative of the mission sent by the Governor-General of India to the 1855, with Notices of the Country, Government, and People”.
15 responses to “Ancient Pictures 1”
လာကြည့်သွားပါတယ်။ ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ နောက်ရှိသေးရင် တင်စေချင်ပါတယ်။
Hi, courteous posts there 🙂 thank’s concerning the interesting word
My feeling is like that I’ve seen these sences before but I also know that it is my illusion and not reality!
I mean “scenes”.
ကဗျာတွေ၊စာတွေရေးပြီးရင်ပို့ရမယ့် email address သိချင်လို့ပါ။ အဖြေပြန်ပေးပါအုံးနော်
ကျွန်တော် ဇော်ဂျီ-ယူနီကုဒ် 5.1 ပြောင်း Box ထည့်ခြင်း လုပ်တာ အဆင်မပြေလို့ပါ၊ blogspot သုံးပါတယ်၊ ကုဒ်ကို head နဲ့ body ကြားထည့်တာပါ၊ ဒါပေမဲ့ error တက်နေတယ်၊ အဲဒါ ကူညီပေးစေချင်ပါတယ်၊ ဘယ်နားမှာ ရေးပြီး အကူအညီ တောင်းရမှန်းမသိလို့ တွေ့တဲ့နေရာမှာဘဲ ရေးလိုက်တာကို ခွင့်လွှတ်ပါ။
ကျနော့် ပို့စ်ကနေ ကုဒ်ကို ကူးယူတဲ့အခါ သတိပြုပါ။
(‘) ဒါလေးကအစပေါ့။ အဲဒါက တစ်ခုစီ နှစ်ချက် ရိုက်ရတာပါ (‘)+(‘) အဲလို။
ပြီးတော့ ပို့စ်အောက်က ကော်မန့်တွေကို သေချာဖတ်စေချင်ပါတယ်။
ဘလော်ဂါလေးတို့ ဆွေးနွေးထားတာ၊ အမှန်ပြင်ထားတာလေးတွေက အသုံးဝင်မှာပါ။
ကုဒ်ဒင်က ပို့စ်မှာ မပေါ်တဲ့အတွက် ကျနော်က ပေါ်အောင် တချို့ ကုဒ်လေးတွေ ပြင်ပြီး ပြထားတာဖြစ်ပါတယ်။
လုပ်ကြည့်ပြီး အဆင်မပြေရင် အချိန်မရွေးပြောပါဗျာ။ ကူညီပါမယ်။
ခင်ဗျားကို Tag ထားတယ်ဗျို့။
ဇော်ဂျီ-ယူနီကုဒ် 5.1 ပြောင်း Box ထည့်ခြင်း လုပ်တာ အဆင်မပြေသေးလို့ပါ၊ ကျွန်တော် အမျိုးမျိုး လုပ်ကြည့်သော်လည် မရလို့ပါ၊ ကျွန်တော်ဘာလုပ်ဖို့ လိုနေလည်း မသိဘူး၊ ကုဒ်ကို အကိုကျွန်တော့စီ ပို့ပေးလို့ရမလား၊ ပြင်ထားတာရော၊ မရရင် ဘယ်နေရာမှာ ဘာပြင်စမ်းကြည့်ရမယ်ဆိုတာပါ အကြံပေးစေချင်ပါတယ်၊ ကျွန်တော် ခူးပြီးခတ်ပြီး အဆင်သင့်လိုချင်လို့လည်း မဟုတ်ပါဘူး၊ အဆင်မပြေမှာဆိုးလို့ပါ။ နောက်ပြီး
အကိုယ့်ဘလော့လို ဒီ Box လေးက အပေါ်လိုက်မရွေ့သွားတာကိုလဲ ကြိုက်လို့ပါ၊ မြင်ကွင်းက မပြောက်သွားတာက ပိုးကောင်းမယ် ထင်လို့ပါ။ ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ခင်ဗျာ၊
ကျွန်တော် ဇော်ဂျီ-ယူနီကုဒ် 5.1 ပြောင်း Box ထည့်ခြင်း လုပ်တာ အဆင်မပြေသေးလို့ပါ၊
ကျွန်တော့ကို ကုဒ်ဒင်း အမှန်လေး ပို့ပေးလို့ရမလား၊ ကျွန်တော်လေ လုပ်ကြည့်တာ စုံနေပြီ၊ မရသေးလို့ပါ၊
နောက်ပြီး အကိုဘလော့ ဒီဘောက်စ် လေးက အပေါ်ကို လိုက်မရွေ့သွားဘဲ ကျန်နေတာကိုလည်း ကြိုက်လို့ပါ၊ တစ်ချို့ ဘလော့တွေ ထည့်ထားတာ လိုက်ရွေ့သွားပြီး မြင်ကွင်းက ပြောက်သွားတယ်၊ အကိုကူညီနိုင်ရင်ကူညီပေးပါခင်ဗျာ
ဒီမေးလ် (mmthinker@gmail.com) ကို ဆက်သွယ်ပါ။